MailButler: Pakupedzisira, Mubatsiri weApple Mail iyo Matombo! | Martech Zone
MailButler: Pakupedzisira, Mubatsiri weApple Mail iyo Matombo!
Chitatu, October 12, 2016 Chitatu, October 12, 2016 Douglas Karr
Pandinonyora izvi, ndiri parizvino mutsamba gehena. Ndine 1,021 maemail asina kuverengwa uye yangu isiri-mhinduro iri kumhanyisa kupinda meseji yakananga kuburikidza nesocial media, kufona, uye mameseji. Ini ndinotumira dzinosvika zana maemail uye ndinogashira anenge mazana maemail zuva rega rega. Uye izvo hazvisi kusanganisira kunyorera tsamba tsamba dzandinoda. Yangu inbox hapasisina control uye Inbox zero sezvazviri kwandiri sezvakaita dhinki dhingi.
Ndakaendesa toni yezvishandiso kubatsira uye ndagara ndanyadziswa, ndichiakanda ese uye ndichidzokera kuApple Mail ine mireza, mafirita, uye VIP zvinyorwa zviri zvigunwe zvandinoshandisa kuvhara dhamu. Hazvina kukwana, zvakadaro. Ndichiri kushungurudzika. Ini ndoda kubata mafungu ezvikumbiro zvirinani. Uye ndinoziva kuti kune ese mashoma mazana emaemail, panogara paine nugget yemukana mune vaviri vandinofanira kunge ndiri pamusoro pawo.
Inenge vhiki rapfuura, Thaddeus Rex, a brand brand iyo inoshanda nesu pane vatengi vanogona kana vangangodaro vasina kundiona pachena vachichema pamberi pebhokisi rangu rekunyora, ndiudzei nezvazvo MailButler. Kusiyana nemapuratifomu mazhinji echitatu anoongorora kana kutora bhokisi rako rekunyora, MailButler inowedzera-pane inosanganisirwa mushe neApple Mail. Izvo zvakanaka zvekuti Apple inofanirwa kungo bvutira iyi kambani kumusoro uye kuwedzera izvi maficha nekutadza.
Zorora - Nekuzeza iyo email iwe unozomboita kuti inyangarika kubva muInbox yako.
Tracking - Ita kuti iwe uzive kana iye anogamuchira akanyatso kuvhura email yako. Ichi chishandiso chakanakisa chevashandi vekusimudzira bhizinesi vachiona kana tarisiro yakavhura yavo yekutanga kana email email.
Kuronga - Rongedza maemail ako kuti atumirwe pane yakatarwa zuva uye nguva mune ramangwana.
Dzosera Send - Kweimwe nguva iwe unogona kugadzirisa kutumirwa kweiyo email uye kugadzirisa zvinogona kukanganisa.
Zvinyorwa - gadzira masiginecha akanaka emaimeri nekusarudza pakati pematemplate avo akasiyana.
Cloud Upload - MailButler inoisa otomatiki mahwindo ekubatanidza kune iyo gore uye inowedzera zvinowirirana zvinongedzo kune yako meseji panzvimbo.
Chiyeuchidzo Chiyeuchidzo - Usambofa wakakanganwa kubatanidza faira kune meseji zvakare yawakataura mune iwo mameseji mameseji.
Avatar Mifananidzo - NdiMailButler mutumwa weemail anogona kuonekwa nyore nyore nemifananidzo yavo yakajeka yeavatar.
Direct Inbox - Tsvaga ako anonyanya-kushandiswa mabhokisi etsamba kubva ipapo kumenu bar - tinya-chete kure kwese kwese
Emojis - Iwo ma icon anodakadza ayo ari chikamu chekutaurirana kwemazuva ano… ikozvino mumaemail, zvakare.
Usabvisa - MailButler inoita kuti zvive nyore kupfuura nakare kese kuti usazvinyora kubva kumatsamba asingadiwe: Kamwe chete!
Heino pfuti yekuti yakapusa sei iyoMailButler kuronga kunoshanda. Chimwe chezvinhu zvandinoda ndechekuti inochengetedza magadzirirwo angu ekupedzisira - saka ndinazvo Rinotevera Bhizinesi Zuva na8: 00 AM. Izvi zvakanaka nekuti ini handina hanya chaizvo nevanhu vachiona kuti ndiri kupindura email yavo na2: 48 AM, heh.
MailButler Inouya Zvimiro
mabasa - Maka maemail ako sekuita-zvinhu kuti usazombokanganwa nezveakakosha mabasa zvakare.
Inbox Kumisa - Zorora, iva neMailButler: Dzvanya otomatiki mamwe maakaunzi emaimeri zvichienderana nemaawa ako ekushanda.
dzokorora - Kurumidza kugovera mutengo kubva kuemail meseji mune kumwe kunyorera kana masevhisi.
Giphy - NdiMailButler iwe unokwanisa kuwana zvakananga kune trazillion mifananidzo yemifananidzo kuti utaure zvirinani.
Isa MailButler YEMAHARA!
Ndiri kunyatsofara nazvo MailButler ane Inbox Kumisa chimiro chiri kuvandudzwa. Zvakawandisa nguva isu tinogamuchira manheru manheru maemail kubva kune vatengi nezvikumbiro izvo isu tinosvetukira pa. Hazvirevi kuti hatidi kuteerera, asi tinowanzo dzidzisa vatengi vedu kuti vagone kubatana nesu chero nguva yemasikati kana yehusiku… kwete tsika yakanaka sezvo tisiri dhipatimendi rekutsigira. Ini ndoda kumbomira ndichigamuchira maemail kusvika zuva rinotevera rebhizinesi. Vatengi vedu vanogona kuve nechimbichimbi vanogona kugara vachitidaidza.
Kuzivisa: Ndiri kushandisa yangu yekuendesa link mune iyo positi netarisiro yekuti tani yako iwe isa uye ubhadhare sevhisi uye ini ndinogona kuiwana mahara! 🙂
Tags: tsamba yeapuroapple mail goreApple tsamba emojisapple mail kurongaApple tsamba yekuteveraapple mail kuzvinyoresaeInbox zerotsambamailbutler
1WorldSync: Yakavimbika Chigadzirwa Ruzivo uye Dhata Management
AdCat: Ongorora, Rongedza, Gadzirisa uye Gadzirisa Yako Yemagariro Midhiya Ad Mifananidzo